Gịnị Bụ Echiche Banyere Uru Gị? | Martech Zone
Tuesday, October 18, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Oge ụfọdụ a na m eche na m bụ mkpụrụ bidoro azụmaahịa nke m afọ abụọ gara aga (mana agaghị m enwe ya n'ụzọ ọzọ). N'oge na-adịghị anya mgbe mmalitere azụmahịa ahụ amaara m na m nọ ná nsogbu n'ihi na m nwere nnukwu ngwaahịa mana enweghị m ụzọ m ga-esi ree ya. M ga-eme a see okwu site na-eme atụmatụ oge ole ọ ga-ewe m na mgbe ahụ na-amụba na site m hour obula. Ihe si na ya pụta bụ na ihe ga-ewe m oge 2 ma m na-eme ihe na-erughị ihe m ga-enweta na stampụ nri… na anaghị ehi ụra.
Ọ bụ mgbe m zutere Matt Nettleton wee nweta ụfọdụ ịzụ ahịa na ahụrụ m njehie nke ụzọ m. I bụ ịchọpụta uru ọrụ m bara, dị ka atụmatụ m si gosipụta, kama ikwe onye ahịa m iji ọrụ ahụ kpọrọ ihe. Enwere m ike ịrụ ọrụ na saịtị ndị ahịa abụọ dị iche iche wee gbanwee mbọ ha na-agba n'ịzụ ahịa, ma otu nwere ike ịme ọtụtụ narị dollar na onye ọzọ nwere ike ịme ọtụtụ narị puku dollar. Otu ọrụ values ​​ụkpụrụ abụọ dị iche iche.
Mgbanwe ahụ n'ụzọ m si azụ ahịa mebiri azụmahịa m. Enwere m ọtụtụ ndị ahịa pere mpe, mana nnukwu ndị ahịa ahụ ekpuchila nke ahụ jiri ọrụ m kpọrọ ihe karịa n'ihi mmetụta dị ala na nzukọ ha. Ihe nzuzu bụ na obere nkwa anyị nwere ugbu a bụ ihe siri ike karị n'ihi na mmụba 10% nwere ike ghara ikpuchi ọrụ anyị kwa ọnwa!
Otu onye jụrụ m ụbọchị gara aga ma m chere na ọ bụ ezi echiche kwupụta ọnụahịa maka ọrụ na saịtị ha. Ha chere na ọ bụ nnukwu akara ngosipụta nke na ọ ga-akụnye ntụkwasị obi na atụmanya ha. Ana m ekwu na ọ bụghị. M tweeted azụ na mgbe ị bipụtara ọnụahịa gị, ọnụahịa bụzi atụmatụ na asọmpi gị niile ga-ama gị aka. Nsogbu ị na-ebipụta ọnụahịa gị bụ otu ihe ahụ m na mbido m kwuru. Ọ naghị echebara uru ọrụ gị bara ka atụmanya.
Ọ bụrụ na ị 99 aghụghọ, ọ na-arụ ọrụ. Na asọmpi megide ọrụ ndị ọzọ dị ọnụ ala. Mana ọ ga-abụrịrị ogbi maka ụfọdụ ndị na-ese ihe eserese aha m na-ekwu ihe njirimara na-efu na-enweghị ịghọta uru akara ngosi nwere ike iwetara ụlọ ọrụ. New logos nwere akọwa ụlọ ọrụ! Enwere ike ịghọta akara ngosi dị ọnụ ala dị ka ọnụ ala - yana ụlọ ọrụ ọ na-anọchite anya ya. Akara njirimara nwere ike ịgbanwe echiche ahụ ma tinyekwuo ọtụtụ ụlọ ọrụ anya.
Ahịa gị bụ ngosipụta dịpụrụ adịpụ nke nghọta ị nwee akara gị. Ọ bụrụ na akụkụ nke ọnụahịa bụ ọnụahịa, n'ụzọ ọ bụla, tinye "ọnụ ala" na aha aha ma tụfuo ọnụahịa asọmpi n'ebe ahụ! Agbanyeghị, ọ bụrụ na uru ị bara bụ ahụmịhe, ọgụgụ isi, echiche, ọkaibe, na nsonaazụ… na-ere ahịa na saịtị na ka atụmanya gị kpebie uru ọ bara ị na-eweta. Mgbe anyị binyere onye ahịa aka ugboro 10 nkwekọrịta nke onye ahịa ọzọ, anyị anaghị agụta ya site na ịrụ ọrụ okpukpu iri. Anyị na-atụle ya site na ịnwa ị nweta nsonaazụ 10, ma ọ bụ nweta otu nsonaazụ na otu ụzọ n'ụzọ iri oge.
Kpachara anya na ma ahia gị ma ahịa gị mgbe ị bịara uru na ọnụahịa. Ha abụghị otu! Ọnụahịa bụ ego ole ị na-agba, uru bụ uru ị ga-aba onye ahịa. Ahịa gị kwesịrị ịkwalite uru ị na-eweta, ọ bụghị ihe ị na-eri. Ma ọ bụrụ na ndị ahịa gị na-eme mkpesa maka gị na ha na-efufu ahịa dabere na ọnụahịa gị, nweta ndị ahịa ọhụrụ. Ọ pụtara na ha aghọtaghị na ha anaghị enyere atụmanya ahụ aka ịmara uru ị bara.
Ntinye: N'oge nsogbu a, m ga-agbakwunye na sistemu ọrụ anyị nwere otu nsogbu a. Ndị mmadụ na-atụkarị anya ịrị elu dabere na nke ha ọrụ ọrụ, ụkpụrụ obibi, ma ọ bụ mgbanwe na ọnụahịa nke ndụ. Nke ahụ bụ uru ha ma n’onwe ha. Onweghị nke metụtara ụlọ ọrụ. Dabere na ndị, ụfọdụ imebiga ihe ókè ha bara uru… na ọtụtụ ndị ọzọ elelị ya. N'ime ọrụ m dum (n'èzí n'thetù Ndị Agha Mmiri), ana m ekwu eziokwu mgbe gbaghaara maka ego. Ọ bụ n'ihi na kama ikwu okwu COLA ma ọ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ, M kwuru okwu banyere nsonaazụ na uru. Ọ bụ ihe na-enweghị isi maka ụlọ ọrụ inye m 20% bulie mgbe m na-azọpụta ha ma ọ bụ na-eme ha okpukpu abụọ na ego.
Ọkt 19, 2011 na 11:12 AM
Enweghị m ike ikwenyekwu. Otu afọ na ọkara gara aga, ahụrụ m ọtụtụ akwụkwọ Alan Weiss nke mere ka m mata mmejọ niile m na-eme mgbe ọ bịara ịkwụ ụgwọ ọrụ m. Dị ka o kwuru n'ụzọ dabara adaba: "Isi ihe na-akpata ụgwọ a na-agba izu dị ala bụ nkwanye ugwu onwe onye". N'ime ọrụ, ọ na-eme * enweghị isi * na-ere oge, dị ka a ga - asị na uru anyị na - ewetara onye ahịa nwere njikọta oge ejiri. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ gosipụtara ọnụahịa na uru a natara, ihe niile dị mma maka mmadụ niile. Ọ dịghị onye na-atụgharị. Gbakwunye na nke a na ọ na -emepụta ụzọ mmekọrịta mmekọrịta na-arụpụta ọrụ, ebe ọ bụ na ha abụọ nwere obi ụtọ.
Personnaly, m na-ahọrọ site nnọọ jikwaa asị Ee ka a ahịa karịa ịsị Mba…
Ọkt 19, 2011 na 12:56 PM
Ndụmọdụ siri ike, Jacques!
Ọkt 24, 2011 na 5:23 PM
Ọ bụ eziokwu - isi okwu gị ruru m n'obi mgbe m na-amụ otu nkuzi ị mere, n'otu ụzọ ahụ. Ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ịgbaso nzọụkwụ gị na-etinye m n'otu ụkwụ dị ka gị afọ ole na ole n'okporo ụzọ! Daalụ maka isiokwu miri emi.